၇ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာအထူးဟောစာတမ်း(၂၂၊၆၊၂၀၂၂မှ၂၉၊၆၊၂၀၂၂).. – See More…
June 21, 2022 Anonymous
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းလုပ်ငန်းသစ်စခြင်း၊အလုပ်နေရာအပြောင်းလဲခြင်း၊အခြေနေတွေပြောင်းလဲခြင်းတွေအလွန်ကောင်းပါတယ်။ပြည်တွင်ပြည်ပခရီးတွေလည်းအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ထွက်နေတဲ့ငွေကြေးတွေလည်းပြန်ဝင်လာမယ်။ကွဲကွာနေတဲ့သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနှင့်ပြန်ဆုံရမယ်။အင်္ဂါနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးမယ်။လုပ်ငန်းတွေအထူးအကျိုးပေးအောင်မြင်ပြီးငွေကြေးကံအထူးကောင်းမွန်လာပါလိမ့်မယ်။ယာဉ် ကားနှင့်ပတ်သက်သည့်လုပ်ငန်း၊အကြံပေးလုပ်ငန်း၊စက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်သည့်လုပ်ငန်းများအောင်မြင်လာလိမ့်မယ်။အများစိတ်ဝင်စားမှုမခံရအောင်အထူးဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။မိမိအတွက်ကံအညံ့များသယ်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ် သိုသိုဝှက်ဝှက်နေထိုင်သင့်ပါတယ်။ခရီးသွာလုပ်ငန်းတွေလည်းအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ငွေကြေးကအဝင်များသလိုအထွက်လည်များပါလိမ့်မည်။ဘာမဆိုအထစ်အငေါ့လေးတွေကြုံတွေ့ရပြီးမှအောင်မြင်မှုတွေရရှိတတ်ပါသည်။အရေးကြီးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်နံနက်၁၀နာရီခွဲမှနေ့လည်၁နာရီအတွင်းစတင်လုပ်ဆောင်ခြင်းရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။အိမ်ထောင်ရှင်များအိမ်ထောင်ဖက်အတွက်စိတ်ပူပင်ရတတ်တယ်။ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရေးစိတ်မတင်မကျဖြစ်တတ်ပါသည်။ချစ်သူနှင့်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အသေးအဖွဲကိစ္စလေးများနှင့်အနေဝေးနေတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး အစာမှားခြင်း၊ဦးခေါင်းနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းတွေဂရုစိုက်ပါအနည်းငယ်ညံ့နေမယ်။လာဘ်နေအရပ်မှာတောင်အရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်စေသောအရောင်မှာပန်းရောင်အနီရောင်ဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးပေဂဏန်းမှာ ၆၊၂၊၉ဖြစ်ပါတယ်။သင့်အတွက်ကံကောင်းစေရန်အိမ်ဘုရားတွင်ကံကော်(၄)ညွန့်အောင်သပြေ(၆)ညွန်လှူပြီးလိုရာဆုတောင်းပါ။
ဒီရက်အတွင်းအဖက်ဖက်အခြေနေကောင်းတွေကြုံတွေ့လာမည်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအထူးတိုးချဲ့သင့်တဲ့အချိန်ပါအလွန်ကောင်းနေပါသည်။မိတ်ဆွေကောင်း၊ဆရာကောင်းတွေလည်းကြုံတွေ့ရမည်။လုပ်ငန်းအတွက်စိတ်ပူပန်သောကများပြာရတတ်မယ်။လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အဆင်မစြေိတ်အခန့်မသင့်မှုများကြုံမယ်။စပ်တူလုပ်ငန်းတွေလည်းအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ပြည်တွင်ပြည်ပခရီးတွေလည်းအကျိုးပေးပါလိမ့်မည်။ပညာရေးကိစ္စတွေကြိုးစားရင်ဒီအချိန်မှာအထူးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ဆန်ဆီဆေးဆားစက်ပစ္စည်းအရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။အလှူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲများနှင့်လည်းကြုံတွေ့ရလျှင်သင့်ထံသို့ကံကောင်းခြင်းတွေရောက်ရှိလာပါလိမ့်မည်။ရွှေမျိုးသားချင်းမိတ်ဆွေများနှင့်အနည်းငယ်ပြဿနာလေးတွေဖြေရှင်းရတတ်သည်။သတိထားပါ။အောက်လက်ငယ်သားအတွက်ခေါင်းရှုပ်ရတတ်သည်။ငွေကိစ္စတွေကတော့အဆင်ပြေချောမွေပါလိမ့်မည်အိမ်ထောင်ရှင်များအိမ်ထောင်ရေးကံကောင်းနေမယ် အိမ်ထောင်ဖက်၏လေးစားအားကိုးခြင်းခံရမယ်ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရေးဆုံဖြတ်ရခတ်ခဲရတတ်သည်။အချစ်မှားခြင်း မချစ်သင့်သူကိုချစ်မိချင်းများဖြစ်တတ်တယ်သင့်အတွက်ကံကောင်စေသောအရောင်မှာအဖြူရောင်၊အညိုရောင်ဖြစ်ပါသည်။လာဘ်နေအရပ် အရှေ့အရပ် အရှေ့တောင်အရပ်ဖြစ်တယ်။အကျိုးပေးဂဏန်း၁၊၆၊၅ဂဏန်းဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးကိစ္စများအားတနင်္ဂနွေနေ့နံနက်၁၁နာရီမထိုးခင်စတင်ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်သင့်အတွက်ကံကောင်းစေရန်သာကူကြိုဘုရားကပ်လှူပြီးမိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။
အလုပ်အကိုင်များတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းပါလိမ့်မည်အလုပ်အတွက် ကူညီမယ့်သူပေါ်လာလိမ့်မည်။ငွေကြေး များများရှာဖွေစုဆောင်းနိုင်လိမ့်မည်။မနာလိုသူများ၏ေောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတတ်ပါတယ်။ငွေကြေး များများရှာဖွေစုဆောင်းနိုင်လိမ့်မည်‪ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက်‬ အိမ်သစ်ဆောက်လျှင် အကောင်းဆုံးကာလ ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းအသစ်ပေါ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) လက်ရှိအလုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အဆက်အသွယ်သစ်များပေါ်လာလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ နာမည်ကောင်းရခြင်း နေရာကောင်းရခြင်း၊ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ရခြင်းများ လုပ်ရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်မရှိသူများ အိမ်ထောင်ကျတတ်သော ကာလဖြစ်သည်။ ဇာတာရှင်သည် ယောက်ျားဖြစ်ပါက အိမ်ထောက်ကျလျှင် ကောင်းပါသည်။အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ အိမ်သုံးပစ္စည်း ဝင်တတ်သည်။ သူခိုး အခိုးခံရတတ်ကြောင်း သတိပြုပါ။ဘုရားဖူးခရီး သွားရတတ်သည်။ ကွဲကွာနေသော ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့် ပြန်ဆုံမည်။အိမ်သို့ အတောင်ပါသော သတ္တဝါများ ဝင်လာတတ်သည်။ ဝင်လျှင် နိမိတ်ကောင်းသည်။ သွပ် သံ သစ် စသော သောကြာနံပစ္စည်းများ ဝင်လာတတ်သည်။ အထူးသတိပြုရန် မိတ်ဆွေရင်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တို့က ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ မြေကို အကြောင်းပြု၍ စိတ်ညစ်ရတတ်သည်။ မြေအ ဝင်မခံရပါ။မြေဝင်လျှင် ကြာသပတေးနံ ထုတ်ပစ်ပါ။ ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်သောပစ္စည်း လှူဒါန်းပါ။ မိသားစု အကြီးအကဲ လုပ်ငန်းအကြီးအကဲ တို့ကြောင့် စိတ်ညစ်ရတတ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဖခင် ကျန်းမာရေး ညံ့တတ်သည်။ ကျန်းမာရေး ခါးနာခြင်း၊ခြေထောက်နှင်ပတ်သက်သည့်မတော်တဆမှုကြုံမယ်။ကံကောင်းစေသောအရောင်အစိမ်း၊လိမ္မော်ရောင်။လာဘ်နေအရပ် အရှေ့မြောက်အရပ်၊အကျိုးပေးဂဏန်း၂၊၇၊၈။ကံကောင်းစေရန်အုန်းထမင်း၊ အုန်းနို့နှင့်ချက်ထား သော ဘဲသားဟင်းကို ဘုန်းကြီးလှူပါ၊
ရာဟုသားသမီးများအတွက်တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း(22 June 2022 – 29June 2022)
အလုပ်ပိခြင်း အလုပ်ထဲတွင် စိတ်ဖိစီးမှု့များရခြင်းမထင်မှတ်သောပြသာနာရင်ဆိုင်ရခြင်း စသည်တို့ကြုံရတတ်သည်အချစ်ရေးမှာ သဘောထားကွဲလွဲခြင်း အကြီးအကျယ်စကားများရခြင်းတို့ကြုံရတတ်သည်ငွေကြေးကံ ခဏ တာမျှ နိမ့်တတ်သည်။ပညာရေးမှာ ကူညီမယ့်သူပေါ်လာတတ်သည်ခရီးတိုခရီးရှည်များ သွားနေရလိမ့်မည်။ ထိုခရီးသည်များသည်လည်း သင့်အတွက် ကျိုးထူးစေပါလိမ့်မည်။ မထင်မှတ်ဘဲ ပညာတစ်ခုသင်ကြားရခြင်း သင်တန်းတစ်ခု တက်ရခြင်းများ ပြုလုပ်ရတတ်ပါသည်။ မရည်ရွယ်ဘဲ မြေဝင်တတ်သည်။ အစစအရာရာသတိကြီးစွာထား ရန် လိုပါသည်။ မိမိအပေါ် မကောင်းကြံခြင်း မကောင်းပြောခြင်းများ ခံရတတ်သည်။ အလုပ်အကိုင်၌ ထိခိုက်တတ်သည်။ရုံးပြင်ကန္နာ၊ အမှုအခင်းများနှင့် ပတ်သက်ရတတ်သည်။ မိမိနှင့်တကွ မိသားစုပါကျန်းမာရေး ညံ့တတ်သည်။ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းအထိ ရောက်ရတတ်တယ်။ လူမျိုးခြား ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ သားသမီး လက်အောက်ငယ်သားအတွက် စိတ်ညစ်စရာကြုံမည်။ ရွှေနှင့် ရတနာပစ္စည်းများ ထွက်ခြင်း၊ ပေါင်နှံရခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။ ငွေဒလဟောထွက်ခြင်း၊ ငွေအတွက် ပြောဆိုဖြေရှင်းရခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။ မထင်မှတ်သော ဆွေမျိုးသားချင်းက အကူအညီကောင်း ပေးလိမ့်မည်။ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ၊ ဆွေမျိုးအကြီးအကဲတို့က အကူအညီအကောင်း ပေးလာလိမ့်မည်ကာလအတွင်း ကောင်းကျိုးချမ်းသာများ ပိုမိုရရှိလာစေရန်နှင့် အညံ့အခိုက်များ သက်သာပြေပျောက်စေရန် အောက်ပါယတြာများကို ဂရုစိုက်ပြုလုပ်ပါလေ။ လာဘ်နေအရပ် အနောက်အရပ်။ကံကောင်းစေတဲ့အရောင်အဝါ အပြာ။အကျိုးပေးဂဏန်း ၅၊၁၊၃။ကံကောင်းစေရန်စေတီတစ်ဆူဆူတွင်ထီးနီ၅လက်လှူပေးပါ။သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုဆေးဝါးဓာတ်စာလှူပါ။
ကြာသပတေးသား/သမီးများအတွက်တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း(22 June 2022 – 29June 2022)
ရာထူးနေရာကိစ္စတွေကတော့အနှောက်အယှက်ကြားကအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။စပ်တူလုပ်ငန်းလုံးဝမလုပ်ပါနှင့်ညံ့ပါသည်။အိမ်ထောင်ရှင်များအိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေမည်။ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရေးခွဲခွါနေထိုင်ရတတ်သည်။ကျန်းမာရေးကတော့အကြောတတ်သောရောဂါဖြစ်တတ်သည်။လာဘ်နေအရပ်မြောက်အရပ်ဖြစ်သည်။အကျိုးပေးဂဏန်း ၁၊၃၊၅၊၇၊၉။ကံကောင်စေသောအရောင်မှာအဝါရောင်ဖြစ်ပါသည်။ကံကောင်းစေရန်အရဟံသိဒ္ဓိ ပုတီး(၃)ပါတ်စိပ်ပြီးလိုရာဆုတောင်းပါ။
သောကြာသားသမီးများအတွက်တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း(22 June 2022 – 29June 2022)
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းငွေအရမ်းဝင်သလို အသုံးစရိတ်လဲအရမ်းများနေတတ်ပါသည်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများငွေဝင်သလောက်မစုမိဘဲ ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နံနေရတတ်သည်။မိတ်ဆွေကောင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ပညာရေးကိစ္စ၊သင်တန်းကိစ္စ၊စားမေးပွဲကိစ္စတွေအထူးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။စပ်တူလုပ်ငန်းကိစ္စစာချုပ်စာတမ်းကိစ္စတွေလည်းအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးကောင်းများကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ဘာသာရေးကိစ္စဘုရာဖူးကိစ္စတွေလည်းပေါ်လာမည်။ကောင်းပါသည်။အောက်လက်ငယ်သာကိစ္စ၊အိုးအိမ်ကိစ္စတွေမှာလည်းဆန္ဒမစောသင့်ပါ။အိမ်ထောင်ရှင်များအိမ်ထောင်ရေးစကားခဏခဏများရတတ်သည်။ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရေးညံ့နေတတ်ပါသည်။လမ်းခွဲရမတတ်ဖြစ်ရတတ်သည်။သင့်ကျန်းမာရေးကတောလေထိုးလေအောင့်နှင့်ပတ်သက်သောရောဂါဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကံကောင်စေသောအရောင်မှာခရမ်းရောင်ဖြစ်ပါသည်လာဘ်နေအရပ် အနောက်အရပ်။အကျိုးပေးဂဏန်း၆၊၈၊၉၊၇။ကံကောင်းစေရန်ငှက်၊ခွေးအစာကြွေးပါ။
စနေသား/သမီးများအတွက်တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း(22 June 2022 – 29June 2022)
ဒီရကျပိုငျးအတှငျးလုပျငနျးသဈစခွငျး၊အလုပျနရောအပွောငျးလဲခွငျး၊အခွနေတှေပွေောငျးလဲခွငျးတှအေလှနျကောငျးပါတယျ။ပွညျတှငျပွညျပခရီးတှလေညျးအောငျမွငျပါလိမျ့မယျ။ထှကျနတေဲ့ငှကွေေးတှလေညျးပွနျဝငျလာမယျ။ကှဲကှာနတေဲ့သူငယျခငျြးမိတျဆှတှေနှေငျ့ပွနျဆုံရမယျ။အင်ျဂါနံနဲ့ပတျသကျတဲ့လုပျငနျးတှအေကြိုးပေးမယျ။လုပျငနျးတှအေထူးအကြိုးပေးအောငျမွငျပွီးငှကွေေးကံအထူးကောငျးမှနျလာပါလိမျ့မယျ။ယာဉျ ကားနှငျ့ပတျသကျသညျ့လုပျငနျး၊အကွံပေးလုပျငနျး၊စကျပစ်စညျးနဲ့ပတျသကျသညျ့လုပျငနျးမြားအောငျမွငျလာလိမျ့မယျ။အမြားစိတျဝငျစားမှုမခံရအောငျအထူးဂရုစိုကျသငျ့ပါတယျ။မိမိအတှကျကံအညံ့မြားသယျဆောငျလာနိုငျပါတယျ သိုသိုဝှကျဝှကျနထေိုငျသငျ့ပါတယျ။ခရီးသှာလုပျငနျးတှလေညျးအောငျမွငျပါလိမျ့မညျ။ငှကွေေးကအဝငျမြားသလိုအထှကျလညျမြားပါလိမျ့မညျ။ဘာမဆိုအထဈအငေါ့လေးတှကွေုံတှရေ့ပွီးမှအောငျမွငျမှုတှရေရှိတတျပါသညျ။အရေးကွီးလုပျငနျးမြားဆောငျရှကျရာတှငျနံနကျ၁၀နာရီခှဲမှနလေ့ညျ၁နာရီအတှငျးစတငျလုပျဆောငျခွငျးရှောငျကဉျြသငျ့ပါတယျ။အိမျထောငျရှငျမြားအိမျထောငျဖကျအတှကျစိတျပူပငျရတတျတယျ။ငယျရှယျသူမြားအခဈြရေးစိတျမတငျမကဖြွဈတတျပါသညျ။ခဈြသူနှငျ့ဘာမှမဟုတျတဲ့အသေးအဖှဲကိစ်စလေးမြားနှငျ့အနဝေေးနတေတျပါတယျ။ ကနျြးမာရေး အစာမှားခွငျး၊ဦးခေါငျးနာကငျြကိုကျခဲခွငျးတှဂေရုစိုကျပါအနညျးငယျညံ့နမေယျ။လာဘျနအေရပျမှာတောငျအရပျဖွဈပါတယျ။ကံကောငျစသေောအရောငျမှာပနျးရောငျအနီရောငျဖွဈပါတယျ။အကြိုးပဂေဏနျးမှာ ၆၊၂၊၉ဖွဈပါတယျ။သငျ့အတှကျကံကောငျးစရေနျအိမျဘုရားတှငျကံကျော(၄)ညှနျ့အောငျသပွေ(၆)ညှနျလှူပွီးလိုရာဆုတောငျးပါ။
ဒီရကျအတှငျးအဖကျဖကျအခွနေကေောငျးတှကွေုံတှလေ့ာမညျ။စီးပှားရေးလုပျငနျးတှအေထူးတိုးခြဲ့သငျ့တဲ့အခြိနျပါအလှနျကောငျးနပေါသညျ။မိတျဆှကေောငျး၊ဆရာကောငျးတှလေညျးကွုံတှရေ့မညျ။လုပျငနျးအတှကျစိတျပူပနျသောကမြားပွာရတတျမယျ။လုပျဖျောကိုငျဖကျမြားနှငျ့အဆငျမစွေိတျအခနျ့မသငျ့မှုမြားကွုံမယျ။စပျတူလုပျငနျးတှလေညျးအောငျမွငျပါလိမျ့မညျ။ပွညျတှငျပွညျပခရီးတှလေညျးအကြိုးပေးပါလိမျ့မညျ။ပညာရေးကိစ်စတှကွေိုးစားရငျဒီအခြိနျမှာအထူးအောငျမွငျပါလိမျ့မညျ။ဆနျဆီဆေးဆားစကျပစ်စညျးအရောငျးအဝယျလုပျငနျးတှအေောငျမွငျပါလိမျ့မညျ။အလှူမင်ျဂလာဆောငျပှဲမြားနှငျ့လညျးကွုံတှရေ့လြှငျသငျ့ထံသို့ကံကောငျးခွငျးတှရေောကျရှိလာပါလိမျ့မညျ။ရှမြေိုးသားခငျြးမိတျဆှမြေားနှငျ့အနညျးငယျပွဿနာလေးတှဖွေရှေငျးရတတျသညျ။သတိထားပါ။အောကျလကျငယျသားအတှကျခေါငျးရှုပျရတတျသညျ။ငှကေိစ်စတှကေတော့အဆငျပွခြေောမှပေါလိမျ့မညျအိမျထောငျရှငျမြားအိမျထောငျရေးကံကောငျးနမေယျ အိမျထောငျဖကျ၏လေးစားအားကိုးခွငျးခံရမယျငယျရှယျသူမြားအခဈြရေးဆုံဖွတျရခတျခဲရတတျသညျ။အခဈြမှားခွငျး မခဈြသငျ့သူကိုခဈြမိခငျြးမြားဖွဈတတျတယျသငျ့အတှကျကံကောငျစသေောအရောငျမှာအဖွူရောငျ၊အညိုရောငျဖွဈပါသညျ။လာဘျနအေရပျ အရှအေ့ရပျ အရှတေ့ောငျအရပျဖွဈတယျ။အကြိုးပေးဂဏနျး၁၊၆၊၅ဂဏနျးဖွဈပါတယျ။အရေးကွီးကိစ်စမြားအားတနင်ျဂနှနေနေံ့နကျ၁၁နာရီမထိုးခငျစတငျဆောငျရှကျသငျ့ပါတယျသငျ့အတှကျကံကောငျးစရေနျသာကူကွိုဘုရားကပျလှူပွီးမိမိလိုရာဆုတောငျးပါ။
အလုပျအကိုငျမြားတိုးတကျဖွဈထှနျးပါလိမျ့မညျအလုပျအတှကျ ကူညီမယျ့သူပျေါလာလိမျ့မညျ။ငှကွေေး မြားမြားရှာဖှစေုဆောငျးနိုငျလိမျ့မညျ။မနာလိုသူမြား၏ေောငျးမွောငျးတိုကျခိုကျခွငျးခံရတတျပါတယျ။ငှကွေေး မြားမြားရှာဖှစေုဆောငျးနိုငျလိမျ့မညျ‪ဗုဒ်ဓဟူးသားသမီးမြားအတှကျ‬ အိမျသဈဆောကျလြှငျ အကောငျးဆုံးကာလ ဖွဈသညျ။ လုပျငနျးအသဈပျေါခွငျး (သို့မဟုတျ) လကျရှိအလုပျနှငျ့ ပတျသကျ၍ အဆကျအသှယျသဈမြားပျေါလာလိမျ့မညျ။ လုပျငနျးနှငျ့ ပတျသကျ၍ နာမညျကောငျးရခွငျး နရောကောငျးရခွငျး၊ လုပျငနျးတိုးခြဲ့ရခွငျးမြား လုပျရတတျသညျ။ အိမျထောငျမရှိသူမြား အိမျထောငျကတြတျသော ကာလဖွဈသညျ။ ဇာတာရှငျသညျ ယောကျြားဖွဈပါက အိမျထောကျကလြှငျ ကောငျးပါသညျ။အိမျထောငျပရိဘောဂ အိမျသုံးပစ်စညျး ဝငျတတျသညျ။ သူခိုး အခိုးခံရတတျကွောငျး သတိပွုပါ။ဘုရားဖူးခရီး သှားရတတျသညျ။ ကှဲကှာနသေော ဆှမြေိုးသားခငျြးမြားနှငျ့ ပွနျဆုံမညျ။အိမျသို့ အတောငျပါသော သတ်တဝါမြား ဝငျလာတတျသညျ။ ဝငျလြှငျ နိမိတျကောငျးသညျ။ သှပျ သံ သဈ စသော သောကွာနံပစ်စညျးမြား ဝငျလာတတျသညျ။ အထူးသတိပွုရနျ မိတျဆှရေငျး လုပျဖျောကိုငျဘကျတို့က ဒုက်ခပေးတတျသညျ။ မွကေို အကွောငျးပွု၍ စိတျညဈရတတျသညျ။ မွအေ ဝငျမခံရပါ။မွဝေငျလြှငျ ကွာသပတေးနံ ထုတျပဈပါ။ ပညာရေးနှငျ့ ပတျသကျသောပစ်စညျး လှူဒါနျးပါ။ မိသားစု အကွီးအကဲ လုပျငနျးအကွီးအကဲ တို့ကွောငျ့ စိတျညဈရတတျသညျ။ အထူးသဖွငျ့ ဖခငျ ကနျြးမာရေး ညံ့တတျသညျ။ ကနျြးမာရေး ခါးနာခွငျး၊ခွထေောကျနှငျပတျသကျသညျ့မတျောတဆမှုကွုံမယျ။ကံကောငျးစသေောအရောငျအစိမျး၊လိမ်မျောရောငျ။လာဘျနအေရပျ အရှမွေ့ောကျအရပျ၊အကြိုးပေးဂဏနျး၂၊၇၊၈။ကံကောငျးစရေနျအုနျးထမငျး၊ အုနျးနို့နှငျ့ခကျြထား သော ဘဲသားဟငျးကို ဘုနျးကွီးလှူပါ၊
ရာဟုသားသမီးမြားအတှကျတဈပတျစာဟောစာတမျး(22 June 2022 – 29June 2022)
အလုပျပိခွငျး အလုပျထဲတှငျ စိတျဖိစီးမှု့မြားရခွငျးမထငျမှတျသောပွသာနာရငျဆိုငျရခွငျး စသညျတို့ကွုံရတတျသညျအခဈြရေးမှာ သဘောထားကှဲလှဲခွငျး အကွီးအကယျြစကားမြားရခွငျးတို့ကွုံရတတျသညျငှကွေေးကံ ခဏ တာမြှ နိမျ့တတျသညျ။ပညာရေးမှာ ကူညီမယျ့သူပျေါလာတတျသညျခရီးတိုခရီးရှညျမြား သှားနရေလိမျ့မညျ။ ထိုခရီးသညျမြားသညျလညျး သငျ့အတှကျ ကြိုးထူးစပေါလိမျ့မညျ။ မထငျမှတျဘဲ ပညာတဈခုသငျကွားရခွငျး သငျတနျးတဈခု တကျရခွငျးမြား ပွုလုပျရတတျပါသညျ။ မရညျရှယျဘဲ မွဝေငျတတျသညျ။ အစစအရာရာသတိကွီးစှာထား ရနျ လိုပါသညျ။ မိမိအပျေါ မကောငျးကွံခွငျး မကောငျးပွောခွငျးမြား ခံရတတျသညျ။ အလုပျအကိုငျ၌ ထိခိုကျတတျသညျ။ရုံးပွငျကန်နာ၊ အမှုအခငျးမြားနှငျ့ ပတျသကျရတတျသညျ။ မိမိနှငျ့တကှ မိသားစုပါကနျြးမာရေး ညံ့တတျသညျ။ ဆေးရုံ၊ ဆေးခနျးအထိ ရောကျရတတျတယျ။ လူမြိုးခွား ဒုက်ခပေးတတျသညျ။ သားသမီး လကျအောကျငယျသားအတှကျ စိတျညဈစရာကွုံမညျ။ ရှနှေငျ့ ရတနာပစ်စညျးမြား ထှကျခွငျး၊ ပေါငျနှံရခွငျးမြား ကွုံရတတျသညျ။ ငှဒေလဟောထှကျခွငျး၊ ငှအေတှကျ ပွောဆိုဖွရှေငျးရခွငျးမြား ကွုံရတတျသညျ။ မထငျမှတျသော ဆှမြေိုးသားခငျြးက အကူအညီကောငျး ပေးလိမျ့မညျ။ ဌာနဆိုငျရာ အကွီးအကဲ၊ ဆှမြေိုးအကွီးအကဲတို့က အကူအညီအကောငျး ပေးလာလိမျ့မညျကာလအတှငျး ကောငျးကြိုးခမျြးသာမြား ပိုမိုရရှိလာစရေနျနှငျ့ အညံ့အခိုကျမြား သကျသာပွပြေောကျစရေနျ အောကျပါယတွာမြားကို ဂရုစိုကျပွုလုပျပါလေ။ လာဘျနအေရပျ အနောကျအရပျ။ကံကောငျးစတေဲ့အရောငျအဝါ အပွာ။အကြိုးပေးဂဏနျး ၅၊၁၊၃။ကံကောငျးစရေနျစတေီတဈဆူဆူတှငျထီးနီ၅လကျလှူပေးပါ။သကျကွီးရှယျအိုမြားကိုဆေးဝါးဓာတျစာလှူပါ။
ကွာသပတေးသား/သမီးမြားအတှကျတဈပတျစာဟောစာတမျး(22 June 2022 – 29June 2022)
ရာထူးနရောကိစ်စတှကေတော့အနှောကျအယှကျကွားကအောငျမွငျပါလိမျ့မညျ။စပျတူလုပျငနျးလုံးဝမလုပျပါနှငျ့ညံ့ပါသညျ။အိမျထောငျရှငျမြားအိမျထောငျရေးအဆငျပွမေညျ။ငယျရှယျသူမြားအခဈြရေးခှဲခှါနထေိုငျရတတျသညျ။ကနျြးမာရေးကတော့အကွောတတျသောရောဂါဖွဈတတျသညျ။လာဘျနအေရပျမွောကျအရပျဖွဈသညျ။အကြိုးပေးဂဏနျး ၁၊၃၊၅၊၇၊၉။ကံကောငျစသေောအရောငျမှာအဝါရောငျဖွဈပါသညျ။ကံကောငျးစရေနျအရဟံသိဒ်ဓိ ပုတီး(၃)ပါတျစိပျပွီးလိုရာဆုတောငျးပါ။
သောကွာသားသမီးမြားအတှကျတဈပတျစာဟောစာတမျး(22 June 2022 – 29June 2022)
ဒီရကျပိုငျးအတှငျးငှအေရမျးဝငျသလို အသုံးစရိတျလဲအရမျးမြားနတေတျပါသညျ။စီးပှားရေးလုပျငနျးလုပျကိုငျသူမြားငှဝေငျသလောကျမစုမိဘဲ ပွနျလညျရငျးနှီးမွှုပျနံနရေတတျသညျ။မိတျဆှကေောငျးတှကွေုံတှရေ့တတျသညျ။ပညာရေးကိစ်စ၊သငျတနျးကိစ်စ၊စားမေးပှဲကိစ်စတှအေထူးအောငျမွငျပါလိမျ့မညျ။စပျတူလုပျငနျးကိစ်စစာခြုပျစာတမျးကိစ်စတှလေညျးအောငျမွငျပါလိမျ့မညျ။ပွညျတှငျးပွညျပခရီးကောငျးမြားကွုံတှရေ့တတျပါသညျ။ဘာသာရေးကိစ်စဘုရာဖူးကိစ်စတှလေညျးပျေါလာမညျ။ကောငျးပါသညျ။အောကျလကျငယျသာကိစ်စ၊အိုးအိမျကိစ်စတှမှောလညျးဆန်ဒမစောသငျ့ပါ။အိမျထောငျရှငျမြားအိမျထောငျရေးစကားခဏခဏမြားရတတျသညျ။ငယျရှယျသူမြားအခဈြရေးညံ့နတေတျပါသညျ။လမျးခှဲရမတတျဖွဈရတတျသညျ။သငျ့ကနျြးမာရေးကတောလထေိုးလအေောငျ့နှငျ့ပတျသကျသောရောဂါဖွဈတတျပါတယျ။ကံကောငျစသေောအရောငျမှာခရမျးရောငျဖွဈပါသညျလာဘျနအေရပျ အနောကျအရပျ။အကြိုးပေးဂဏနျး၆၊၈၊၉၊၇။ကံကောငျးစရေနျငှကျ၊ခှေးအစာကွှေးပါ။
စနသေား/သမီးမြားအတှကျတဈပတျစာဟောစာတမျး(22 June 2022 – 29June 2022)
၇ ရကျသား/ သမီးမြားအတှကျ၂၀၂၂ခု ဇူလိုငျ လ တဈလစာအထူးဟောစာတမျး…
ခုနှဈရကျသားသမီးမြားအတှကျ တဈလစာဟောစာတမျး ( ၁. ၇ . ၂၀၂၂ မှ ၃၁. ၇. ၂၀၂၂ ) အထိ…
Previous: ” မွှအေိပျမကျနိမိတျနှငျ့ သငျ့ဘဝ အဆိုးအကောငျး “
Next: ၇ရကျသားသမီးမြား အတှကျ 22.6.2022 မှ 27.6.2022အထိ ရကျစိပျ အဟော …